मोबाइलको प्याटर्न वा पासवर्ड बिर्सिनु भयो, ‘फ्री’ मा आफै यसरी खोल्न सकिन्छ ? – Sodhpatra
मोबाइलको प्याटर्न वा पासवर्ड बिर्सिनु भयो, ‘फ्री’ मा आफै यसरी खोल्न सकिन्छ ?
मोबाइल अनलक गर्ने तरिका !
प्रकाशित : १ फाल्गुन २०७७, शनिबार १२:२० February 13, 2021
तर कहिले काहिँ यस्तो भइदिन्छ हामी आफ्नो पासवर्ड तथा प्याटर्न बिर्सिन पुग्छौं । त्यसपछि सर्भिस सेन्टर जानुको विकल्प हामीलाई हुँदैन । यस्तोमा हाम्रो समय र पैसा दुवै खर्च भइरहेको हुन्छ । तर आज हामी तपाईंलाई यस्तो तरिका बताउँदै छौं, जसबाट तपाईंले पासवर्ड वा प्याटर्न बिर्सेको अवस्थामा समेत तत्काल सहजै आफ्नो फोन अनलक गर्न सक्नुहुनेछ ।
अब त्यसमा फर्गेट पासवर्ड विकल्प देख्न सक्नुहुनेछ । त्यसमा आफ्नो जिमेल आईडी र पासवर्ड राख्नुहोस्, जुन तपाईंको डिभाइसमा प्रयोग भइरहेको छ । यति गरिसकेपछि तपाईंको फोन अनलक हुनेछ र नयाँ प्याटर्न राख्न सक्नुहुनेछ । -टेचपानाबाट